Antananarivo, 5 Janoary 2021 - Niroso tamin’ny fanolorana fiarabe mpitatitra rano miisa telo ny UNICEF, entina hanamafisana ny fahafaha-manaon’ny JIRAMA eo amin’ny famatsiana rano fisotro madio any amin’ireo tanànan’Antananarivo sy Toamasina. Ho fanohizana ny fanohanana amin’ny sehatry ny fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio ho an’ny mponina sy hiadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina COVID-19, ary satria tsapa ny maha zava-dehibe ny rano amin’ny fisorohana sy fiatrehana ny valanaretina, dia hanampy olona mihoatra ny 75.000 izay monina ao amin’ny tanànan’Antananarivo sy Toamasina ity fanomezana ho an’ny governemanta Malagasy ity, indrindra amin’izao fotoana faharitan’ny rano izao. Ny ampahany amin’ny mponina tokoa mantsy dia mipetraka any amin’ireo faritra tsy tongan’ny tambazotra famatsian-drano, na zara raha misitraka famatsian-drano.
Tamin’ny fiantombohan’ny volana Jolay 2020, raha mbola tena tao anatin’ny krizin’ny COVID-19 i Madagasikara, ny MEAH sy ny UNICEF dia nikarakara hetsika fanampiana ny vidin’ny rano teny anivon’ireo paompin-drano iombonana manerana ny tanànan’Antananarivo sy Toamasina (Hetsika Avotr’aina) nandritra ny 3 volana. « Dingana vaovao ao anatin’ny fanampian’ny UNICEF ho an’ny MEAH indray no  tanteraka anio tamin’ny alàlan’ny fanomezana fiarabe mpitatitra rano miisa telo (3) izay mahazaka rano 15 000 litatra tsirairay, hanamafisana ny fahafaha-manaon’ny JIRAMA eo amin’ny famatsian- rano mba hahafahan’ireo mponina an-tanan-dehibe misitraka rano fisotro madio », hoy Michel Saint-Lot, solontena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara. Ireo fiara ireo dia hampiasaina mba hamatsiana ireo siniben-drano napetraka isaky ny faritra izay manana olana amin’ny fahazoana rano fisotro madio, miaraka amin’ireo toerana izay tsy tongan’ny tambazotra famatsian-dranon’ny JIRAMA.
Toy izao ny fanambaran’ny Ministry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Voahary RAKOTOVELOMANTSOA : « Mampahatsiaro ny hasarobidin’ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana amin’ny hetsika rehetra hiadiana amin’ny COVID-19 ireo tetikasa sy hetsika mandeha amin’izao fotoana izao. Mampiseho izany fa ny MEAH dia mikaroka vahaolana hatrany mikasika ny fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio. »
Tafiditra indrindra ao anatin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny COVID-19 sy ny fanatsarana ny sehatra ara-pahasalamana amin’ireo tanàna roa ireo io hetsika io, raha mijery ny maha sarobidy ny rano amin’ny hetsika rehetra hisoroana sy hiatrehana ny valanaretina, indrindra fa ny fanasana tànana amin’ny savony.
Tsara ny manamarika fa efa namandrika fiarabe mpitatitra rano 2 fanampiny ny UNICEF, izany hoe mitotaly 5 arak’izany ireo kamiô ireo. Hatolotra ny JIRAMA amin’ny voalohandohan’ny volana Martsa ireo, entina hanamafisana ny famatsian-drano any amin’ireo faritra tsy mahazo rano fisotro madio ao Antananarivo. Olona miisa 50.000 fanampiny, izany hoe mitotaly 125.000 araka izany ny olona hisitraka ny fanamafisana ny famatsian-drano fisotro madio nohon’ny fampiasana ireo fiarabe mpitatitra rano miisa 5 ireo, izay nitaky famatsiam-bola mitentina iray miliara ariary. Nisaotra manokana ny Sampan-draharaha Koreana misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena (KOICA) ny UNICEF tamin’ny nanoloran’izy ireo ny famatsiam-bola ho an’ireo kamiô 3 ireo tamin’io andro io, ary nisaotra ihany koa ny governemanta Norveziana tamin’ny famatsiam-bola nomeny hahazoana fiarabe 2, izay hatolotra amin’ny vola Martsa ho avy izao.